Netfilikis - Wikipedia
Netflix, waa adeeg bixiyaha adeegyada warbaahinta Mareykanka iyo shirkada wax soo saar oo xaruntiisu tahay Los Gatos, Kalifornia, oo la aasaasay sanadkii 1997. Ganacsiga ugu horreeya ee shirkaddu waa adeeggeedu ku saleysan yahay rukhsad kaas oo bixiya qulqulka tooska ah ee maktabadda aflaanta filinka iyo barnaamijyada telefishanka, oo ay ku jiraan kuwa lagu soo saaray gudaha guriga. Laga bilaabo Abriil 2019, Netflix wuxuu lahaa inka badan 148 milyan oo rukumenti bixin ah oo adduunka oo dhan ah, oo ay ku jiraan 60 milyan oo Mareykanka ah, iyo in ka badan 154 milyan oo rukumado ah oo ay ku jiraan tijaabooyin bilaash ah. Waxaa laga heli karaa adduunka oo dhan marka laga reebo dhul weynaha Shiinaha (xayiraadaha maxalliga ah), Suuriya, Kuuriyada Woqooyi, iyo Crimea (cunaqabateyntu Mareykanka awgeed). Shirkaddu waxay sidoo kale xafiis ku leedahay Hindiya, Netherlands, Barasiil, Jabaan, iyo Koonfur Kuuriya. Netflix waa xubin ka mid ah Motion Picture Association (MPA).
Agoosto 29, 1997; 24 sanadood ka hor (1997-08-29)
Adduunka oo dhan (ka baxsan Dhulka Shiinaha, Suuriya, Kuuriyada Waqooyi
Soo saarista filimada
soo saarka telefishanka
4 Iibka iyo suuqgeynta
Milkiyad[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Laga soo bilaabo 2017, saamiyada Netflix waxaa badanaa lahaan jiray maalgashadeyaal hay'ad ah, oo ay ku jiraan Shirkadaha Capital Group, The Vanguard Group, BlackRockand kuwa kale.
Maaliyadda[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sannad maaliyadeedka 2018, Netflix wuxuu soo sheegay inuu kasbaday $ 1.21 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, iyadoo dakhliga sannadlaha ah uu yahay US $ 15.8 bilyan, koror ku dhawaad ​​116% wareegii miisaaniyadda ee hore. Saamiyada shirkadda Netflix ayaa ka sarreeyay in ka badan $ 400 saamiyadeedii ugu sarreeyay sanadkaan 2018, iyo suuq-gelinta suuqgeeda ayaa gaartay qiime ka sarreeya US $ 180 bilyan bishii Juun 2018. Netflix wuxuu 261 ka galay liiska 2018 Fortune 500 liiska shirkadaha ugu waaweyn ee Mareykanka dakhliga soo gala. Netflix waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay kan ugu wanaagsan ee saamiyada sanadkii 2010, iyadoo celcelis ahaan la soo celiyay 3,693%.
Alaabada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Kontoroolka fog ee Aquos oo leh badhanka Netflix
Sannadkii 2007, Netflix wuxuu shaqaalaysiiyay mid ka mid ah hormuudihii hore ee DVRbusiness Anthony Wood si uu u dhiso "Netflix Player" kaasoo u oggolaanaya in qulqulka waxyaabaha tooska ah lagu ciyaaro toos looga daawado telefishanka halkii PC ama laptop. In kasta oo ciyaartoygu markii hore lagu horumarin jiray Netflix, Reed Hastings wuxuu aakhirkii xidhay mashruuca si uu uga caawiyo dhiirigelinta soo-saareyaasha kale ee qalabka dhismaha inay ku daraan taageerada Netflix-ka-dhisay. Wood ayaa ugu dambeyntii bilaabay ciyaaryahanka sidii qalabkii ugu horreeyay ee Roku Inc. kaas oo hadda caan ku ah u qulqulka ciyaartoydiisa fiidiyowga qulqulka leh, iyada oo Netflix u adeegto sidii maal-gashade aasaasiga ah ee shirkadda cusub.
Sannadkii 2011, Netflix wuxuu soo saaray badhan Netflix oo loogu talo galay kontoroolada fog fog, taasoo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay si dhakhso leh Netflix uga galaan aaladaha la jaan qaada.
Shirkadda Netflix waxay daaha ka rogtay nooc ka mid ah aaladda cusub ee loo yaqaan "The Switch" oo lagu qabtay Maker World Newer Faire New York. "The Switch" wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala Netflix inay damiyaan nalalka markay ku xiran yihiin nidaamka nalka guriga ee smart. Waxay sidoo kale ku xireysaa shabakadaha maxalliga ah ee isticmaaleyaasha si ay awood ugu siiso macaamiishooda inay dalban karaan, isla markaana aamusiyaan taleefanka qof ee riix batoonka. In kasta oo aaladda aan la sharciyeyn, haddana Netflix waxay soo saartay tilmaamo ku daabacan websaydhkooda, sida guriga loogu dhiso (DIY). Tilmaamaha ayaa daboolaya labadaba qaab dhismeedka korantada iyo barnaamijyada barnaamijka.
Ilaa iyo sanadkii 2015, shirkaddu waxay taageero farsamo oo muhiim ah ka heshay CNRSconcerning ee Faransiiska ee isku-duwista iyo qaabaynta, iyada oo loo marayo CNRS 'Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N). Bishii Marso 2017 shirkii golaha guud ee Barcelona ee teknoolojiyadda mobilada, shirkadda Mareykanku waxay ku soo bandhigtay shaybaarka furan ee teknoolojiyadda Faransiiska: aalad cadaadis u saamaxaysa tayada HD + muuqaal leh baaxad ka yar 100 kilobytes daqiiqaddii, 40 jeer wax ka yar baahida HDTV. oo la jaan qaadi kara adeegyada mobilada ee adduunka oo dhan.
Bishii Meey 2016, Netflix waxay abuurtay qalab cusub oo la yiraahdo FAST si loo go'aamiyo xawaaraha isku xirnaanta internetka.
Iibka iyo suuqgeynta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Qolka Netflix ee 2017 San Diego Comic-Con
Intii lagu jiray Q1 2011, iibinta iyo kirooyinka DVD-yada iyo disk-yada diskiga ayaa hoos u dhacay qiyaastii 35%, iibinta diskiyada xirmooyinka ah ayaa hoos u dhacay 19.99% illaa $ 2.07 bilyan, iyadoo lacag badan lagu kharash gareeyay diiwaangelinta marka loo eego kirada dukaamada. Hoos udhacani waxaa loo aaneeyey kororka caanka ah ee Netflix iyo adeegyada kale ee socodka.
Bishii Luulyo 2012, Netflix wuxuu shaqaaleysiiyay Kelly Bennett - Madaxweynihii hore ee Warner Bros. Kuxigeenka Interactive, Suuqgeynta Caalamka - si ay u noqoto sarkaalkeeda cusub ee suuqgeynta. Tani waxay sidoo kale buuxisay booska Netflix oo madhanaa muddo lix bilood ah markii ay CMO Leslie Kilgore ka tagtay Janaayo 2012.
Websaydhka Netflix waxay leeyihiin 117.6 milyan oo macaamiil ah ilaa sanadka 2018, iyadoo 8.3 milyan lagu daray rubuc-afaraad ee 2017. Laga bilaabo Janaayo 28, 2018, Shabakada Netflix waxay gashay kaalinta 30-aad ee shabakadaha ganacsiga ugu weyn adduunka iyo 9.-ka websaydhka ugu ganacsiga badan Mareykanka.
Netflix waxay leedahay barta Twitter-ka, oo loo isticmaali jiray inay ku qorto tigreega dhacdooyinka cusub iyo kuwa soo socda oo ay ku jiraan haashtaha si loogu dhiirrigeliyo ka-soo-qaybgalayaasha dhagaystayaasha in ayan kaliya daawanin bandhigga laakiin ay wax ku biiriyaan hashtag laftooda.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Netfilikis&oldid=233962"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Abriil 2022, marka ee eheed 07:34.